Madaxweynaha Kenya oo golohiisa wasiirada kala hadlay arrimaha Soomaaliya – Somali Top News
Madaxweynaha Kenya oo golohiisa wasiirada kala hadlay arrimaha Soomaaliya
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa maanta guddoomiyey shir golaha wasiirada dalkaas ay yeesheen oo looga xaajooday sidii tub loogu dejin lahaa xalinta “muranka xuduudda badda” ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Golaha wasiirada ayaa isku raacay tallaabooyin ay tahay in la qaado, si loo xaliyo xiisadda kala dhaxeysa Soomaaliya, islamarkaana loo ilaaliyo dhulka Kenya, sida lagu sheegay email uu soo diray xafiiska madaxweyne Kenyatta.
Wasaaradda arrimaha dibedda Kenya ayaa la sheegay inay qaraarkan shaacin doonto goor dhow oo galabta ah, sida lagu sheegay bayaanka.
Dowladda Kenya ayaa toddobaadkii tagay dalkeeda ka cayrisay safiirkii Soomaaliya, ayada oo u yeeratay midkeeda, kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yaalla dhul-badeed ay Kenya leedahay. Eedeymahaas oo ay beenisay dowladda Soomaaliya.
Dib ayaan idin kala soo socodsiin doonnaa, marka uu soo baxo qaraarka, ha ka fogaan Caasimada Online, Insha Allah.
← Dowladda Kenya oo Soomaaliya ugu hanjabtay iney cunaqabateyn saari doonto
Kenya Says will engage with Somalia over Border dispute →
Dowladda Shiinaha oo difaacday Muslimiinta ku nool Baarma
Ra’iisul Wasaare Khayre Iyo Golihiisa Wasiirada Oo Ka Qayb Galay Xuska 20-sano Guurada Puntland
Dowladda Soomaaliya oo 1.2 Milyan oo doller u fasaxday Axmad Madoobe